UPHAHLA OLUMNYAMA LWEESLINGLES PROS & CONS - UKUPHUCULWA KWEKHAYA
Eyona Ukuphuculwa Kwekhaya Uphahla oluMnyama lweeSlingles Pros & Cons
Uphahla oluMnyama lweeSlingles Pros & Cons
Wamkelekile kwisikhokelo sethu kuphahla olumnyama lwamnyama kunye nobubi kubandakanya ukuba ziyintoni na, izibonelelo zabo kunye neempendulo kwimibuzo edumileyo. Xa usakha ikhaya okanye ubeka uphahla esele lukhona, ukukhetha uhlobo lwophahla lwophahla kubandakanya izinto ezibalulekileyo ezinje ngokuqina kunye nokuba uphahla lulinganiswe iminyaka emingaphi.
Owona mthi uphahla uqhelekileyo wenziwe ngomxube we-asphalt kunye nezinye izinto zokuqinisa ii-shingles, ezinje nge-fiberglass, iselulosi, okanye ukhuni.
Abanini bamakhaya kufuneka bakhethe isitayile sophahla lombala kunye nombala wokuncoma ikhaya. Amathambo ophahla amnyama yayiyeyona ndawo iqhelekileyo yophahla esetyenzisiweyo kwiminyaka eyadlulayo.
Nje ukuba abanini khaya bagqibe kwelokuba bafuna ukufanisa inkangeleko yophahla olubiza kakhulu, njengophahla lwamaplanga, bajika baba ngamdaka ophahla omdaka kunye nemibala emininzi.
njani iqhina iqhina inyathelo ngenyathelo
Nangona kunjalo, amaphahla amnyama ophahla abuye kwisitayile enkosi kuyilo lwangoku lwasekhaya. Ziye zaphinda zaduma ngakumbi kunee-shingles ezimdaka okanye ezikhanyayo.
Zithini iiShawles zoPhahla oluMnyama?
Iinkqubo zoLuhlu oluMnyama oluPhezulu
Umzi oMnyama weShelles Cons
Ngaba iiShawles zoPhahla oluMnyama zingumbono ombi?
Ngaba uphahla oluMnyama olushushu?
Ngaba Ungapeyinta iiSlingles eziMnyama?
Uphahla oluMnyama lumi ngaphandle kwiindawo ezinophahla olungathathi hlangothi okanye umbala omdaka kwaye zenze ukhetho lombala olungqongqo ukuhambelana nesitayile sasekhaya.
Nangona oophahla abamnyama bophahla inokuba lolona hlobo lubalaseleyo loyilo lwasekhaya, kukho ezinye izinto eziqwalaselwayo xa ukhetha oophahla abamnyama bophahla.
Esi sikhokelo siquka ulwazi malunga neenzuzo kunye neengxaki zamatye amnyama ophahla ukukunceda wenze esona sigqibo sihle xa ubakhethela uphahla lwakho.
Amabala ophahla amnyama yi-asphalt kwaye ayenziwa ngezinto zokongeza ukubomeleza, njengoko kuchaziwe apha ngasentla. Nangona kunjalo, ii-shingles eziqinileyo ezimnyama zihlala zifakwe kwi-fiberglass kuzo endaweni yezinto eziphilayo, ezibenza zingangeni manzi.
Isongezo se-fiberglass sikwadala nesingxobo esingacimiyo kunye nesinye esinokuguquguquka. Ukuguquguquka kunceda ukumelana nobunzima bekhephu kunye nokubetha kwesichotho. Iimpawu ezimnyama eziQinisekisiweyo ze-Energy Star ngenxa yomxholo we-fiberglass zinokuvumela abaninimzi ukuba bafanelekele ikhredithi yerhafu.
Iingubo zophahla zikhusela ikhaya kwimozulu nakwizinto kwaye zisebenza ukuhombisa ikhaya. Amathambo ophahla amnyama ahambelana nendalo ngcono kwaye asetyenziselwa iintlobo ezahlukeneyo zophahla.
I-shingles yophahla iza ngobukhulu obahlukeneyo kunye nemibala kwaye iza njengombala okanye i-multidimensional okanye uluhlu olunye, olucocekileyo njenge-tab-shingle ezintathu. Bona Okuninzi iintlobo zamaplanga ophahla kweli phepha.
Amakhonkco amnyama ophahla anceda ukugcina ubushushu ekhaya ebusika- Umbala omnyama ubamba ubushushu elangeni kunye nokwakha kwi-attic.
Umoya ofudumeleyo ubangela isithintelo kubanda bangaphandle. Ivumela ukhetho kubanini bamakhaya ukufaka inkqubo yokuhambisa umoya oshushu ungene emakhayeni abo kwigumbi eliphezulu. Ehlotyeni, umoya oshushu uhlala ubambekile kwigumbi eliphezulu, ikwabonelela ngesithintelo ukuthintela ukuphulukana nomoya opholileyo endlwini.
Amathambo ophahla amnyama afihla ukungafezeki kakuhle- Banikezela ngenkangeleko engenamthungo yokudibanisa nakuphi na ukuqhekeka, iithayile ezingalunganga okanye indawo engalinganiyo.
Nceda unyibilike ikhephu -Namaqondo obushushu aphezulu eethayile ezimnyama zophahla, anokunceda ukunyibilika komboniso kunye nomkhenkce eluphahleni ebusika. Nangona kungenako ukwenza umahluko obonakalayo kumaxesha obushushu obandayo kunye nokuwa kwekhephu, uphahla olumnyama olumnyama luyanceda.
Imile ngaphandle -Iithayile zophahla ezimnyama zihlala ziqaqambisa umtsalane wokwakha ikhaya kwaye zinokwenza imibala yangaphandle ibonakale icace gca.
Isitayile - Iiprofayili zasekhaya zale mihla zibandakanya amaphahla amnyama ophahla, athandwayo ngabathengi abancinci.
Ixesha elide lobomi -I-Black asphalt roof shingles zinoqoqosho ngakumbi kwaye zinokuhlala ukusuka kwi-15 ukuya kwi-30 iminyaka.
IiAtics ezishushu -Kumakhaya angenayo i-attic kwindawo ephambili yekhaya, uphahla olumnyama luya kunyanzela ubushushu bungene endlwini kwimozulu eshushu nenesomileyo. Ubushushu obongezelelekileyo bonyusa ityala lokupholisa lasekhaya ehlotyeni elishushu.
Ukusetyenziswa kwamandla okwandisiweyo Iinkampani ezininzi zamandla azihlawulisi ngokusetyenziswa kwamandla kuphela; bahlawulisa ngokusetyenziswa kwamandla ngamaxesha aphezulu. Uphahla olumnyama lunokubangela ukuba kusetyenziswe amandla ongezelelweyo ngeyona ndawo ishushu emini.
Ukwanda kobushushu - Amathambo ophahla amnyama afikelela kumaqondo obushushu aphezulu kunalawo anombala okhanyayo. Ubushushu obongezelelekileyo bunokubangela ukonakala kweeshelles ngokuhamba kwexesha.
Ngaba Yandisa Ikubumbe - Ngexesha lemozulu efumileyo yamaxesha onyaka okanye kwimozulu ephezulu ebumnyameni ixesha elininzi lonyaka, uphahla olumnyama olumnyama lunokuvumela ukufuma okuvaleleke phantsi kwazo ukuze kwakheke. Ukufuma kunokubangela isikhunta esonakalisayo kuphahla lwendlu.
Abanini bamakhaya abaninzi bakuthatha njengokuxhoma uphahla njengomsebenzi osebenzayo xa kusakhiwa ikhaya elitsha okanye kuphahla kwakhona indlu esele ikho. Kodwa ukhetho lwe imibala yophahla shingle ininzi yokwenza nokuvela kwekhaya. Uphahla olumnyama kwindlu encinci lunokuba nzima kakhulu, lwenze ukuba indlu ibonakale incinci kunakuyo.
Uphahla olumnyama kwikhaya elikhulu kunokubonelela ngesitayile semibala yekhaya kunye necala. Ukujonga ukuba ungakanani uphahla olubonisa ngaphambili nangasemva kwendlu kunceda ukujonga ngefuthe lophahla olumnyama kuyilo lwekhaya.
Umahluko oqaqambe ngokuthelekiswa nezinye izinto ezingaphandle kwendlu unokwenza ukubonakala okumangalisayo. Amathambo ophahla amnyama lukhetho oluthandwayo, kwaye ukukhetha uphahla olumnyama kumnini wokukhetha komninikhaya.
Njengoko kuxoxiwe, uphahla olumnyama lunokubangela imicimbi ngokutyhala ubushushu obongezelelekileyo endlwini kwimozulu eshushu, enelanga neomileyo. Kodwa okwahlukileyo kuyinyani. Ubushushu bunokuvalelwa kwigumbi eliphezulu, kwaye ukuba ukhuselekile kakuhle, igumbi elingaphantsi kwalo linokuthintela umoya opholileyo ekhaya.
Indawo enophahla lwe-cathedral inokufuna ukufakwa okungaphezulu phakathi kophahla kunye nophahla lwangaphakathi ukuthintela ubushushu obugqithisileyo ekuweleni endlwini.
Ngelixa abaninimzi abaninzi benokuthi bacinge ngombala okhanyayo ophahleni ukuze kuthintelwe ubushushu obuvela kuphahla olumnyama, i-shingles ekhanyayo ayikhuthazi ubushushu bangene ekhaya ngeenyanga ezibandayo zobusika.
Imibala yophahla ekhanyayo nayo ibonisa ukungafezeki ngokulula kunamacala ophahla amnyama. Nawuphi na umngxunya ongangqinelwanga ngokuchanekileyo uya kudala umsantsa ongalinganiyo kwiithayile. Kunokuba nzima ukudibanisa i-shingles enemibala ekhanyayo kunye neskimu sombala wasekhaya, kuba banikezela kancinci okwahlukileyo.
Ikhaya elipeyintiweyo elimhlophe okanye elingwevu likhangeleka kakuhle ngophahla olunombala okhanyayo, kodwa eminye imibala inzima ukuhambelana nophahla olukhanyayo, njengeblue, beige, cream, green green, sage, kunye nabanye. Amakhaya ane-siding-sidingled siding awahlali ekhangeleka ngombala okhanyayo ophahleni.
Ukuba uphahla lwendlu ngumbala omnye kwaye umninikhaya ufuna ukutshintsha ukubonakala kophahla, ukutshintsha uphahla lonke ukutshintsha umbala yiprojekthi ebiza kakhulu.
Kuyenzeka ukuba upeyinte amaphahla ophahla olunye umbala, kodwa kukho izinto ezilungileyo nezingalunganga kwesi sisombululo. Kwaye, kuthathelwa ingqalelo umngcipheko wokuba umninikhaya aphakame eluphahleni ukuze apeyinte i-shingles, kuyacetyiswa ukuba kuqeshwe ingcali.
Logama nje uphahla lukwimeko elungileyo, ukupeyinta i-shingles ukufezekisa ukujonga okungcono ngumbono osebenzayo noqoqosho.
Nangona kunjalo, ukupeyinta amaphahla ophahla awongezi naziphi na iimpawu zokungangenwa ngamanzi kwaye akuyi kutywina nakuphi na ukuvuza. Ukuba kukho nawuphi na umonakalo ophahleni, kufuneka kulungiswe kuqala ngaphambi kokupenda.
Iithayile ezaphukileyo okanye ezilahlekileyo kufuneka zitshintshwe ngokupheleleyo. Ngaphambi kokupeyinta amatyathanga amnyama ophahla, cinga ngezi ngxaki zilandelayo:
Iipeyinti zophahla ezimnyama ezenziwe ngepeyinti ziya kubonisa ukunxiba ngokukhawuleza.
Iipeyinti zophahla ezimnyama eziMnyama kufuneka ziphindwe zenziwe ipeyinti qho emva kweminyaka emihlanu ukuya kwesixhenxe.
Ngalo lonke ixesha ukuphinda kulungiswe ii-shingles, uphahla kufuneka lulungiswe, lucoceke kwaye lu-prim.
Ipeyinti ekwiithayile zophahla ezimnyama inxitywa ngokulula lilanga, imvula, isichotho, ikhephu, kunye nomkhenkce, obangela ukuba ipeyinti ikhawuleze iphele.
Ipeyinti ye-Acrylic, esekwe emanzini, iyimfuneko yokupenda i-black shingles ukuvumela ukufuma okuqokelelweyo komile phantsi kwe-shingles.
Ipeyinti yokuthintela amanzi inokubambisa ukufuma kwaye ibangele ukungunda kunye ne-algae kwaye ayicetyiswa ukuba ipeyintwe amaplanga amnyama ophahla.
Ipeyinti yophahla lwe-asphalt emnyama kuya kufuneka ukuba ichukunyiswe njengoko ipeyinti iya iphela okanye ipeyinti. Amabala ophahla amnyama apeyintiweyo aya kubonisa kuwo nawuphi na umbala wepeyinti, ngakumbi imibala ekhanyayo okanye engathathi hlangothi.
Uninzi lweekhontraktha zokuphahla azifumani zicelo zininzi zokupenda amatyathanga ophahla. Kwaye nangona benokwazi imigaqo esisiseko yokupeyinta oophahla bamnyama, basenokungabinabo ubungcali. Iikontraki ezininzi azizukuvuma ukupeyinta amaphahla amnyama ophahla.
Ipeyinti ye-acrylic yophahla lwe-shingle isetyenziswa ngesitshizi kwaye ifuna ukuba uchwephesha ukuze wenze umsebenzi ngokuchanekileyo. I-asphalt shingles inendawo erhabaxa, ephakanyisiweyo efuna iingubo ezininzi zepeyinti. Umsebenzi wepeyinti ongaphantsi kwiithayile zophahla ezimnyama unokuba yingozi, ubangele ulondolozo olongezelelekileyo.
Ezinye iikontraki zokuphahla zinokucebisa ngepeyinti ye-elastomeric, ethe tyaba kunye nophahla lwengqele njengoko amaqondo obushushu etshintsha. Le peyinti iya kuthintela ukulungiswa kwangethuba, kodwa njengoko kukhankanyiwe, amanzi aya kuthi abanjiswe phantsi kweesingles ezibangela ukonakala kumbumba okanye i-algae.
Okwangoku, zikhona izibonelelo zokupeyinta amatyathanga amnyama ophahla. Umbala okhanyayo uya kunceda ekunciphiseni ubushushu ekhaya, kwaye kungcono ukuba indawo ipeyintwe endaweni yokuphinda uphahla.
Ukujonga i-asphalt roof shingles yomelele, ihlala ixesha elide, kwaye inemozulu, ukupeyinta uphahla olumnyama omnyama ukufezekisa umbala ophahleni lwasekhaya yindlela elula kwaye engabizi kakhulu.
Ucinga ntoni malunga nophahla lwamnyama kophahla olulungileyo kunye nolubi? Ngaba zikhona izinto esiziphosileyo? Ukuba kunjalo sixelele. Ngolwazi oluthe kratya jonga kwinqaku lethu iintlobo zeendlela zophahla kweli phepha.
Uyilo lwekhitshi yegali
izinto ezintle zokuthetha kwikhadi lomtshato
izimvo zokwamkela uhlahlo-lwabiwo mali olusezantsi
izipho zokukhumbula unyaka ngamnye
Utshatele phi u Prince william
iikhabhathi zekhitshi ezenziwe ngeglasi ekhazimlayo
UJared haibon kunye no-ashley iaconetti